musha AFRAN FOOTBALL STORI Mohamed Elneny Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Yakapedzisira Kugadziriswa pane February 9, 2018
LB inopa Nyaya Yese yeChishanu yeBhola inonyanya kuzivikanwa neNickname; "Neny". Our Mohamed Elneny Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri uye zvakawanda zvisingatauri pamusoro pake.
Hungu, munhu wese anoziva nezvehutano hwake pane izvozvi asi vashomanana vanofunga kuti Mohamed Elneny Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Mohamed Elneny Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Mohamed Naser El Sayed Elneny akaberekwa musi we 11th yaJuly 1992 muEl Mahalla El Kubra, Egypt. Somwana, Elneny aida kuti ave pane imwe nebhora muimba yake yeEgipita.
As muchengeti anoisa, iye aive asingatambudzi mumugwagwa webholaja aive akarara nebhora munguva yehuduku hwake. Kutanga kwake kutarisana nebhola kwakabva kuna baba vake, avo vakanga vari mutambi wechikwata chechidiki kuBaladeyet Al-Mahalla muEgypt. Mhedziso yebhola yakaiswa muitiro apo Erneny akanga achiri muduku zvikuru.
"Ndinoyeuka kuti baba vangu vaida kuti ndakaenda kunorara nebhora," Elneny anoti. "Akati: 'Unofanira kushamwaridzana nebhora.' Akatanga kundidzidzisa pandakanga ndava nemakore matatu. Chido chake chakakura ndechokuti ndakava nyanzvi yebhola. "
Elneny akatanga bhora rake revechiduku naAlly. Muna 2008, akatamira kuEl Mokawloon SC munguva ye 2010-2011. Elneny akapfuura uye akagara ari muboka rekutanga. Kutevera nhamo yePort Said Stadium, kutanga kweFebruary 2012, muEgypt Premier League yakagadziriswa uye mitezo yose yakatevera ye2011-12 Egyptian Premier League yakasarudzwa. Pa 10 March 2012, muAfrica Football Association yakasarudza chisarudzo chavo chekusiya chikasara chemwaka wacho.
Elneny aifanira kupisa rwendo rwakamuendesa kumativi eBasel's Swiss football asati asvika kuArsenal. Mune mamiriyoni eAXMUMX Euro anotarisana naArsenal ndiyo yekupedzisira kuchinja pfuma yake.
Mohamed Elneny Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Elneny anotora simba kubva kumukadzi wake akanaka uye akanaka. Vose vakaroorana vane mwanakomana anonzi Malik.
Elneny haisi mufananidzo wokukwezva kuparidzirwa kusingadikanwi kubva kumunda kana kutsauswa nezviedza zvinopenya zveguta racho. Elneny uye ane hanya zvikuru nezvezvinhu zvemhuri uye musha wavo. Kubvira pamazuva ake okutanga, basa reEleny nemwanakomana wake rave rakaramba rakadzika.
Mohamed Elneny Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Upenyu hwehupenyu
Mohamed Elneny ane chirevo chinotevera kumunhu hwake.
Mohamed Elneny's Strengths: Iye anonyanya kufungidzira, akavimbika, ane hanya, anonzwira tsitsi, anonyengetedza, asingatauri, anonzwisisa, Mupi wePasi uye Shamwari.
Utera hwaM Mohamed Elneny: Dzimwe nguva, Elneny anogona kunge ari kunyanya kushushikana, kusava nechokwadi uye kusafungira.
Chii Mohamed Elneny anoda: unyanzvi hwemaziso, kumba-based hobbies, kunonoka pedyo kana mumvura, kubatsira vanodiwa, kudya kwakanaka ne Mohamed Salah, shamwari yake yeEgipita.
Chii Mohamed Elneny asingadi: Hisquequeque hisque his hisquequeque his hisque his his his hisque his his his hisque his hisquequequequeque hisque hisque hisque hisque hisque hisque hisqueque hisque
Mohamed Elneny Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Lifestyle
Mararamiro aMohamed Elneny anogona kupfupiswa mune imwe mufananidzo. Haasi mucheche akapfuma munyika yose, asi anonyatsofarira pfuma yake uye anoishandisa nenzira yakarurama.
Mohamed Elneny Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hunyaradzi
Kana iwe wakanga wakateerera Elneny kubvira paakajoka Arsenal kubva kuBasel mu2016, iwe uchaziva kuti muIjipita anonyatsoda bhanti.
Chokutanga, paiva ne trolling ye Alexis Sanchez pamusoro peChile kusina kukodzera kuWhite Cup, uye munguva pfupi yapfuura pane kuonekwa kwakanyanya kune mumwe chete mushure mokubva Arsenal kuManchester United.
Ive mhirizhonga yeEgypt zvakare yakasvibisa mahesheni pachibvumirano chitsva cheMesut Ozil asati asarudzwa. Moh Salah imwe nguva inopikisa Elneny achiedza kuita kuti vateveri vamuvheneke nokutaura kuti akange asarudzwa kuAssenal's Player of the Month award.
Mohamed Elneny Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Mohamed Elneny pakutanga aibva kumhuri yepakati-mapoka mumhuri asati agadzirwa nebhola rekutsvaga pakupedzisira muhomwe yevabereki vake vaida, Mr naNaser El Sayed Elneny. Amai vake muchengeti wenguva yakazara apo baba vake vari mudzidzisi wechidiki mutoro asi iye zvino anotarisira basa romwanakomana wake.
Kubudirira kwaEleny nhasi kwakauya somugumisiro webasa rababa vake semudzidzisi wechidiki. Kunyanya zvakadaro, zvinotsigira kubva kuna amai vake, vakoma nehanzvadzi.
Mohamed Elneny Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Upenyu hwechitendero
iye muMuslim anozvipira, anonyengetera katanhatu pazuva. Anotora minyengetero yake pamakororo. Mukusavapo kwemunamato wake wemunamato, Elneny anoshandisa chero zvinhu zvemitambo zvakakodzera kugamuchirwa nekutenda kwake. Anocherechedza Ramadhani zvakajeka sezvakaratidzwa mumufananidzo uri pasi apa.
CHOKWADI KUTI: Tinokutendai nokuverenga vedu Mohamed Elneny Childhood Story pamwe neustold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.
Football Football Diary
Medhi Benatia Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Naby Keita Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts
Victor Wanyama Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Emmanuel Adebayor Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
George Weah Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Christian Benteke Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Riyad Mahrez Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts
Mohamed Salah Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Kubvumbi 12, 2020
Yakagadziridzwa zuva: Ndira 24, 2019
Cheick Tiote Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: June 16, 2020